Aynu Qarsano: Shahaadooyinka SSL ee Bilaashka ah ee Qofkasta | Laga soo bilaabo Linux
Qofkasta oo dhib kusoo maray abuuritaanka degel aamin ah wuu ogyahay sida ay u murugsan tahay ugana xanaaqsan tahay helitaanka shahaadada SSL. Aynu 'Encrypt' si otomaatig ah u socodsiino hawshan una oggolaanno maamuleyaasha websaydhka inay ku hawlgeliyaan HTTPS hal guji ama amar ka timaadda barta.
Marka aynu 'Encrypt' bilawno adeeggeeda xagaaga 2015, u suurto gelinta HTTPS degel websaydhku wuxuu u sahlanaan doonaa sida loo soo rakibo gabal yar oo ah maareynta maamulka shahaadada serverka:
sudo apt-get rakibid-encrypt lets-encrypt myweb.com
Taasi waa waxa kaliya ee ay u baahan tahay si loogu suurtogeliyo https on myweb.com!
Barnaamijka maamulka 'En Encrypt' ayaa ah:
Si otomatig ah u caddee Aynu Qarinno inaan xakameyno websaydhka su'aasha laga qabo
Soo hel shahaado SSL lagu kalsoon yahay oo ku dheji shabakadeena internetka
La soco goorta shahaadadu dhacayso oo si otomaatig ah u cusbooneysiinayso
Naga caawi inaan ka noqonno shahaadada haddii ay waligeed lama huraan noqoto.
Ma jiri doono emayl xaqiijin ah, ma jiri doono qalab dejin adag, ma jiraan shahaadooyin dhacay oo "jabinaya" bogga. Iyo, sida haddii taasi aysan ku filnayn, Aynu Encrypt bixinno shahaadooyin bilaash ah, iyada oo aan loo baahnayn in laga takhaluso hanti sanadba sanadka ka dambeeya.
Maxay tahay sababta adeeg noocaas ah loogu bixiyo bilaash?
Weligaa ma u maleyneysay intee in le'eg ayuu ammaanku internetka noqon karaa haddii rakibidda iyo qaabeynta HTTPS ay fududaan lahayd? Hagaag, inta badan dhibaatadaas waxay kujirtaa helitaanka shahaadooyinka SSL ee lagu kalsoon yahay, kuwaas oo guud ahaan la bixiyo waxayna noqon karaan wax dhib ah in lagu rakibo kuwa kucusub mawduuca.
Aynu ka dhigno Encrypt waa hay'ad shahaado bilaash ah, otomatig ah oo furan oo ay abuureen Kooxda Cilmibaarista Amniga Internetka (ISRG).
Mabaadi'da muhiimka ah ee ka dambeysa Aynu Qarsano waa:
libreQof kasta oo iska leh domain wuxuu heli karaa shahaado ansax ah oo ku saabsan domainkaas oo eber ah.
Automático: Nidaamka diiwaangelinta ee dhammaan shahaadooyinka si fudud ayuu u dhacaa inta lagu jiro nidaamka aasaasiga ah ee server-ka ama qaabeynta, halka cusbooneysiintu si toos ah ugu dhacdo asalka.
Seguro: Aynu 'Encrypt' u adeegno sidii barxad loogu hirgaliyo farsamooyinka amniga casriga ah iyo dhaqamada wanaagsan.
Hufan: Dhamaan diiwaanada bixinta iyo dib ula noqoshada shahaadooyinka waxaa heli doona qof kasta oo raba inuu dib u eego.
Furan: Soosaarka iyo borotokoolka cusboonaysiinta otomaatiga ah wuxuu noqon doonaa halbeeg furan oo softiweerku wuxuu noqon doonaa ilo furan hadba inta suurtagal ah.
Iskaashi: Sida borotokoollada asaasiga ah ee Internetka laftoodu, Aynu Qarsoodi u noqonno waa dadaal wadajir ah oo looga faa'iideynayo bulshada oo dhan, iyadoo aan la xakamayn karin hay'ad keliya.
Waxay horey u leeyihiin kafaala qaadayaal sida Mozilla, Cisco iyo Electronka Frontier Foundation (EFF). Si kastaba ha noqotee, sidoo kale waad sameyn kartaa ku biir.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato sida aynu 'Encrypt' uga shaqeyneyno daaha gadaashiisa, waxaan kuu soo jeedinayaa inaad fiiriso qaybta farsamada goobta rasmiga ah ee mashruuca. Hadaad runti rabto inaad quusto faahfaahinta, waxaad ka aqrisan kartaa faahfaahinta maamuuska buuxa barta Github.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Noticias » Aynu Qarsano: Shahaadooyinka SSL ee Bilaashka ah ee Qof walba
Mawduuca waa mid xiiso leh, laakiin hadda isku xirnaanta aaminka ahi waa tiro yar. Waa sidaas, waxaanan ka shakisanahay inay taasi si weyn isu beddeli doonto. Taas macnaheedu maaha inaan sida ugu fiican ugu dadaalno, tanina waa fursad.
Fikrad ahaan, dhammaan iskuxirayaashu waa inay ahaadaan kuwo amni leh, haddii kalese, hadda ma noqonayso sabab la'aan ...
Taasi waa war aad u fiican, in kasta oo aan doorbido inaan soo dejiyo oo aan ku rakibo shahaadada gacanta.
Halkan Mexico shahaadooyinka waxay udhaxeeyaan 40 ilaa 100 US waxay kuxirantahay bixiyaha, ka hel bilaash \_ o /
Waxaan rajeynayaa rajadayda oo dhan adeegga!
Xilligan waxaa suurtagal ah in la helo shahaadooyin bilaash ah: https://www.startssl.com/?app=0
laakiin ... mashruucani waa mid cajiib ah, soo dhaweyn iyo wax ku biirinta waxaan awoodno ...
Waxaan u maleynayaa inaysan aheyn sirta SSL laakiin mid leh TLS, taas oo ah nidaamka ugu yar ee Mozilla ay ku taageeri doonto nooca 34 ee Firefox ... SSL v3 wuu sii kala baxayay waxaana loo arkaa inuu dhintay , marka waa muhiim in la bixiyo inaad taas ogaato.
Dadaal aad u fiican oo ay sameeyeen koox sidan u kala fog (maxay Cisco ku qabaneysaa halkaas?), Aan aragno haddii aan wax yar uga dhowaan karno qarinta shabakadda.
Ma loo isticmaali karaa adeegyada aan webka ahayn sida server-ka SVN ama waxyaabo la mid ah?
Taasi waa su’aal wanaagsan. Ma garanayo ... laakiin waan fahamsanahay inay sidaas tahay. Waa inaan sugnaa sanadka soo socda ... 🙂
Wankii Jhoed dijo
Kaliya waxay u shaqaysaa ubuntu?
Sideen ku rakibayaa haddii aan ka doonayo CentOS?
Jawaab Jhoed Ram
Maya. Waxay u shaqeyn doontaa nidaam kasta oo qalliin, sidaan u fahmay. Sikastaba, waa inaan sugnaa.